राष्ट्रपति भण्डारीले किसानको कोदो, मकै र गहुँ खेती हेलिकप्टरबाटै अवलोकन गरेपछि…! « Postpati – News For All
राष्ट्रपति भण्डारीले किसानको कोदो, मकै र गहुँ खेती हेलिकप्टरबाटै अवलोकन गरेपछि…!
पुष १९, बिर्तामोड । बुधबार झापा आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँको कृषि परियोजनालाई हेलिकप्टरबाटै हवाई अवलोकन गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार दिउसो उक्त परियोजनाको हेलिकप्टरबाटै हवाई अवलोकन गरेकी हुन्, यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छापेको छ । शिवसताक्षी नगरपालिका–४ स्थित चन्द्रडाँगी कृषि फार्मको भने उनले स्थलगत अवलोकन गरिन् । कृषि फार्म ८४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । फार्मलाई कृषि विश्वविद्यालय बनाउने पहल भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले अवलोकन गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कृषि अवलोकनमा आउने भएपछि सो क्षेत्रका ६ वटा स्कुल बिदा नै गरेर विद्यार्थी र शिक्षक कार्यक्रमस्थलमा आएका थिए । राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि उनीहरु कार्यक्रमस्थलमा पुगेका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारी दुई स्थानको अवलोकन गरी बुधबारै काठमाडौं फर्किएकी थिइन् ।